Fitaizana sembana :: Nosantarina tany Antsiranana ny fananganana ny « Akany Fitiavana » - ewa.mg
News - Fitaizana sembana :: Nosantarina tany Antsiranana ny fananganana ny « Akany Fitiavana »
L’article Fitaizana sembana :: Nosantarina tany Antsiranana ny fananganana ny « Akany Fitiavana » est apparu en premier sur AoRaha.
Kaominina Antananarivo Renivohitra: « Diso ny filazana fa nandratra olona ny polisy monisipaly »
« Tsy marina ny vaovao milaza fa nandratra olona ireo polisy monisipaly », hoy ny fanambarana eo anivon’ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo, omaly. Niantso ny rehetra mba hahay hanaja sy hankasitraka ny asan’ireo polisy monisipaly ireo ny CUA. « Tsy mikely soroka manatanteraka ny adidy masina iantsorohany ho an’ny vahoakan’Antananarivo izy ireo », hoy ihany ny fanambarana.Sarobidy ho an’ny kaominina ny ainaNotsiahivin’ny fiadidiana ny Tanàna fa andraikitry ny polisy monisipaly ny mandrindra ny mpiara-monina sy mampanaja ny lalàna. Miasa andro aman’alina izy ireo, na vitsy aza mba hisian’ny fanajana sy ny fankatoavana ny lalàna mifehy ny fiaraha-monina. « Matoky tanteraka ny polisy monisipaly amin’ny fomba fiasany sy ny fampiharany ary ny fitandrovany mandrakariva ny andraikiny ny kaominina », hoy ihany ny eo anivon’ny CUA. Mazava ny hafatry ny mpitantana : « Sarobidy ho an’ny mpitantana ny Tanànan’Antananarivo ny ain’ny tsirairay ».Synèse R. L’article Kaominina Antananarivo Renivohitra: « Diso ny filazana fa nandratra olona ny polisy monisipaly » a été récupéré chez Newsmada.
BAOLINA KITRA AMBONY LATABATRA :: Taranja vaovao heverina hampamiratra haingana ny Malagasy ny Teqball
Nampahafantarina, ny faran’ny herinandro teo, teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena mahamasina ny taranja vaovao iray heverina ho voafehintsika malagasy ao anatin’ny fotoana fohy. Teqball no anarana’izy ity, izay azo faritana ho toy ny baolina kitra ambony latabatra. Nanamarika ny lanonana fampahafantarana ny taranja vaovao antsoina hoe “teqball” ny fizaràna latabatra vaovao roa filalaovana ny taranja avy amin’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fédération internationale de teqball-FITEQ). Izany dia narahina fampisehoana nataon’ireo mpilalao teknisianina roa nentin’ny FITEQ sy mpilalao malagasy vitsivitsy efa miangaly ny taranja avy amina klioba goavana eto an-drenivohitra. Nanolotra ireo fitaovana ny solontena avy amin’ny Federasionin’ity taranja vaovao ity notarihin’ny tompon’ andraikitra misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena, Marius Vizer Jr sady isan’ireo tompo-marika nanorina ny Federasiona. Nandray ireo fitaovana tetsy an-kilany ireo mpitantana ny Komity Olympika Malagasy, notarihin’ny filohany, Randrianasoloniaiko Thierry Siteny sy ny sekretera jeneraliny, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo. “Eto am-panombohana, ny latabatra iray amin’ireo dia hoentina hampiroboroboana ny taranja eto Analamanga ary ny faharoa kosa hapetraka any Atsimo Andrefana hampi­voarana ny taranja any amin’io faritra io. Mbola hisy latabatra folo hafa ho avy ato ho ato”, hoy Randrianasoloniaiko Thierry Siteny. Mino aho fa tsy hananosarotra ny fampiroboroboana ity taranja vaovao ity satria hitako fa ho mora hain’ny mpilalao baolina malagasy izy io… sady tsy mila toerana malalaka sy fotodrafitrasa be ankoatra ny latabatra sy baolina… ka heveriko fa ho mora ny hamiratantsika amin’ny sehatra iraisam-pirenena”, hoy hatrany ny filohan’ny KOM. Hivoatra haingana dia haingana Rafitra sy komity vonjimaika aloha no hampiroborobo ny taranja mandra-pijoron’ny rafitra federaly. “Tsy maintsy mbola hiandry ny governemanta vaovao aorian’io an’ny marimaritra iraisana io vao afaka hajoro ny federasiona hisahana ity taranja ity”, hoy hatrany Randrianasoloniaiko Siteny. Marihina fa efa nisy andiany roa tamin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany amin’ny “teqball”, natao ka tany Reims, Frantsa no nanaovana izany tamin’ity taona ity. Isan’ny efa nahazo fanasana tamin’izany aza isika Malagasy saingy mbola tsy afaka namaly ny fanasana sy nandray anjara. Ekipa valo amby zato avy amina firenena roa amby efapolo no efa nanana solontena tamin’izany. Handeha haingana dia haingana ny fampiroboroboana ny taranja, araka ny fanamarihan’ireo tompon’andraikitry ny Federasiona iraisam-pirenena. “Firenena dimy aty Afrika no efa miangaly azy ity ary ho isan’ireo taranja hanaovana fampisehoana ny teqball amin’ny Lalao afrikanina manaraka amin’ny taona ho avy. Tsy hiandry ela fa amin’ny Lalao afrikanina manaraka io dia efa ho lasa taranja hifaninanana mihitsy izy”, hoy i Marius Vizer Jr. Ity farany moa dia nampi­risika indrindra ny fampiroboroboana sy ny fanapariahana ny taranja eny anivon’ny sekoly ankoatra ireo rafitra federaly. Mitovy fa tsy sahala Ny taona 2012 no niforonan’ny “teqball” raha toa ka tamin’ny taon-dasa no tafatsangana ny Federasiona iraisam-pirenena. Fiadiana ny tompondaka eran-tany roa izay no efa tontosa ary firenena telo dia i Meksika sy Shina ary Turkménistan no efa kandidà hampiantrano indray ny andiany fahatelo, amin’ny taona 2019. Mitovitovy amin’ny taranja tenisy ambony latabatra ity “teqball” na baolina kitra ambony latabatra ity. Azo lalaovin’olon-tokana, olon-droa lehilahy na vehivay na lahy sy vavy miaraka izy. Izay mpilalao na ekipa mahazo seta roa voalohany no mivoaka mpandresy. Isa roapolo no enjehina isaky ny seta iray. “Azo ampiasaina handefasana ny baolina any amin’ny faritry ny mpifanandrina ny faritra rehetra amin’ny vatana ankoatra ny tanana… Ary intelo mikitika baolina ny mpilalao na ekipa andaniny farafahabetsany alohan’ny handefasany ny baolina any amin’ny mpifanandrina”, araka ny fanazavana fohy nataon’Andriamanarivo Francklin, izay teknisianina nanankinan’ny Komity Olympika ny fanapariahana ny taranja. L’article BAOLINA KITRA AMBONY LATABATRA :: Taranja vaovao heverina hampamiratra haingana ny Malagasy ny Teqball est apparu en premier sur AoRaha.
Ny zanany sy ny zafikeliny ihany no atidoha: tratra ireo jiolahy namono pasitera tao Miarinarivo
Saron’ny zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritry ny Zandarimaria ao Miarinarivo ireo jiolahy miisa 15 tompon’antoka amin’ny fanafihana narahina vonoan’olona tao Miarinarivo. Raha ny tatitra nampitain’ny zandary, notafihin’ny andian-jiolahy ny tokantrano iray ao Anorankely, fokontany Anorambe, kaominina ambanivohitr’Ambatomanjaka, distrikan’i Miarinarivo, ny alin’ny 10 novambra 2020 lasa teo. Lasan’ireo mpanafika ny ny vola mitentina 1 tapitrisa Ar ary tsy vitan’izay fa novonoin’ireo mpanafika koa ny raim-pianakaviana iray pasitera tao an-trano. Nanao fikaroham-baovaao ny zandary taorian’ny fanafihana ka jiolahy miisa 12 indray voasambotra; ny telo kosa, mbola karohina. Niaiky ny heloka vitany ireo jiolahy nandritra ny famotorana nataon’ny zandary. Efa fantatra koa ireo telo mbola miariaria, araka ny tatitra nampitain’ny zandary. Tao anatin’ny fanadihadiana hatrany ny nilazan’ireo jiolahy fa lonilonim-pianakaviana momba ny famarotana lova ny anton’izao fanafihana narahina vonoan’olona izao. Ny zanak’ilay pasitera sy ny zafikeliny ihany no tompon’antoka amin’izany, raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary ao Miarinarivo.Jean ClaudeL’article Ny zanany sy ny zafikeliny ihany no atidoha: tratra ireo jiolahy namono pasitera tao Miarinarivo a été récupéré chez Newsmada.
Une bonne nouvelle pour la natation malgache. La sirène du Managing club, Holy Antsa Rabejaona, a pulvérisé son ancien record national sur 50m papillon au championnat de Tatarstan en Russie, le week-end dernier. En effet, elle a enregistré un chrono de 28sec83 contre 29sec50 qu’elle avait signé lors du championnat national en mars 2021. La multiple championne de Madagascar est actuellement à Kazan. Elle a obtenu une bourse d’une année au centre de préparation de nageurs de haut niveau. Manjato RazafyL’article Natation : Antsa Rabejaona s’offre un nouveau record national a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fanajariana: natsahatra avy hatrany ny asa eny Alasora
Tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, niteraka resabe tao anaty tambajotran-tserasera ny fanajariana ataona teratany sinoa eo amin’ny vohitr’Ambohitrandriananahary Alasora. Nisy ny fanambarana avy any amin’ny fitaleavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina Analamanga : « Manoloana ireo olona mitondra « engin » mikasa ny hitrandraka eny an-toerana, dia nidina ifotony avy hatrany ny teo anivon’ny ministeran’ny Serasera sy ny kolontsaina, izay notarihin’ny fitaleavana mitahiry ny vakoka sy ny harem-pirenena ary ny fitaleavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina eto Analamanga. Nijery ny zava-misy sy nanadihady ny delegasiona ary nampitsahatra avy hatrany ny asa. Mbola eo am-panangonana ireo taratasy takin’ny fanjakana moa ilay teratany sinoa, milaza fa tompon’ny tany. Ary mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny rafi-pahefana rehetra isan’ambaratongany amin’ny izao ».Raha ny voalazan’ny tantara, ao anatin’Alasora i Ambohitrandriananahary. Noho izany, tsy afa-misaraka amin’ny tantaran’Alasora, izay anisan’ny tendrombohitra 12 masina ny tantarany. Ambaran’ny tantara fa « eo amin’ny alahamadin-tanin’Alasora no nipetrahan-dRafohimanjaka. Nanambady an’Andriamanalinjaka izy ary niteraka efatra : Andriamanelo, Andriamananintany, Andriankotofananina ary Rafotsindrindramanjaka. Ao Alasora no mitondra ny Rovan’Andriamananintany. Ao Alasora ihany koa no misy ilay vato nanaovan’Andriamananitany sy Trimoanala fanorona, izay heverina ho fanorona natao voalohany teto Imerina, ary namonoana azy teo am-panaovana izany fanorona izany. Teo Alasora no niamboho Rafohy ka Andriamanelo zanany no nanjaka nandimby azy. Andriamanelo no tena nahafantarana an’ Alasora, toy ny niadiany tamin’ny vazimba ka nahareseny tanteraka azy ireny ».Nangonin’i HaRy Razafindrakoto L’article Fanajariana: natsahatra avy hatrany ny asa eny Alasora a été récupéré chez Newsmada.
Kitra-Rabesandratana Eric: tsy handà raha voaantso hanazatra ny Barea
Vaovao niparitaka sy nisarika ireo mpankafy ny taranja baolina kitra ny mahakasika ny fanehoan-kevitra nataon-dRabesandratana Eric, ny amin’ny fanazarana ny ekipam-pirenena malagasy. Nohamafisiny tamin’ny valim-panontaniany, rehefa nanontanian’ny mpanao gazety ny France Bleu, fa tsy handa velively Rabesandratana Eric, ny hanazatra ny ekipam-pirenena malagasy Barea. Fanararaotra lehibe izany, hoy izy. “Tiako i Madagasikara, tiako ny Barea, ka tsy hametraka olana aho fa hanaiky avy hatrany, raha toa ka misy ny fiantsoana ahy hanazatra ny Barean’i Madagasikara”, raha ny nambaran-dRabesandratana Eric. Marihina, tsy mbola nisy fametraham-pialana na ihany koa filazana fanoloana ny mpanazatra Nicolas Dupuis, hatreto. Tsy mbola naneho ny heviny mahakasika izany, rahateo, ny federasiona malagasy ny baolina kitra, izay hany tokana manana ny fahefana amin’ny fanoloana mpanazatra. Tsiahivina, mpilalao ary kapiteny teo aloha, tao amin’ny PSG, Rabesandratana Eric, ny taona 1989 hatramin’ny 2004 izy no nilalao tao Frantsa. Nifindra namita ny asany amin’ny maha mpanao baolina azy tao Belzika izy taorian’izay, ny taona 2005 hatramin’ny 2007. Efa nitazona ny andraikitra maha mpanazatra azy, tao amin’ny ekipan’ny Miami tany Etazonia ihany koa Rabesandratana Eric, ny taona 2014 sy 2015. Andrasana, araka izany, ny tohin’ity resaka ity.Mi.RazL’article Kitra-Rabesandratana Eric: tsy handà raha voaantso hanazatra ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Fanabeazana nomerika: sekoly 20 hisitraka ny teknolojia vaovao
Sekoly 20 vaovao no hisitraka ny fanabeazana nomerika miaraka amin’ny fitaovana sy ny fanofanana omen’ny Orange Solidarité Madagascar, amin’ity taom-pianarana 2020-2021 ity miampy ny sekoly roa hafa tsy afaka nampiharana izany noho ny valanaretina niseho teto nandritra ny taom-pianarana lasa teo. Natao omaly ny fanavaozana sy fanohizana ny fiaraha-miasa teo amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana sy ny Orange Solidarité tamin’ny fanaovan-tsonia ny antontan-taratasy mirakitra izany. Nandritra ny enina taona efa nampiharana ny tetikasa, sekoly 136 no mampihatra ny fanabeazana nomerika. Novatsiana fitaovana tablette, ordinatera sy serveur matanjaka mirakitra ny lesona sy ny fampiharana manaraka ny fandaharam-pianarana ofisialy eto Madagasikara ny mpisitraka. Voaofana ny mpampianatra hikirakira ny fitaovana ary omena fahalalana amin’ny fampiasana tablette ny mpianatra. Manaraka fivoaran’ny teknolojia ny fampianarana ary tanjona ny hanampy ny mpianatra hitovy amin’ny any ivelany, hoy ny tomponandraikitry ny Orange Solidarité, Randriambeloma Josie.Nanamafy ny minisitra mpiahy ny fanabeazana fa tokony hisitraka ny teknolojia vaovao avokoa ny mpianatra manerana ny Nosy ary zava-dehibe ny tetikasa miaraka amin’ny Orange Solidarité. Efa namolavola antotan-kevitra azo ampidirina ao anatin’ny serveur hampiasaina ny teknisinina ao anatin’ny minisitera. Miparitaka ho an’ny sekoly manerana ny Nosy ny fanabeazana nomerika.Vonjy A.L’article Fanabeazana nomerika: sekoly 20 hisitraka ny teknolojia vaovao a été récupéré chez Newsmada.